Dakọtara ụdị ọdịdị geometric dị mgbagwoju anya na mgbidi oghere nke oghere oghere | Androidsis
Oghere Oghere bụ mgbaghoju anya na-atọ ụtọ iji daba akụkụ geometric
Oghere Space na -abịa n'aka anyị dị ka egwuregwu mgbagwoju anya na ụdị anya a kpebisiri ike na cubic. Ọ na -arụ ọrụ maka ihu ọma ya na -ada ụda ụda nke na -enye anyị ohere izu ike ma tụgharịa ụdị ọdịdị geometric ruo mgbe anyị chọtara ebe dabara na ya.
Site na sistemụ a, anyị na -eche otu egwuregwu ihu na nke ahụ ọ na -aghọ ihe a na -ahụkarị maka ụbọchị ọkụ ndị a na ezumike. Bugharia iberibe ahụ ruo mgbe ịchọtara kpọmkwem ọnọdụ dị na aha nke pụtara maka mmezu teknụzụ ya na ọdịnaya ya ka ị kpọghee n'ụdị textures na ụwa ndị ọzọ.
1 Bugharia ụdị ọdịdị geometric na mgbaghoju oghere oghere
2 Ọnụ ọgụgụ dị mgbagwoju anya nke geometric iji gafere mgbidi oghere
3 Ị nwere ndụ atọ na Space Wall
Bugharia ụdị ọdịdị geometric na mgbaghoju oghere oghere
Oghere Space na -akpọga anyị n'ụdị ụdị geometric niile mee ka ha dabara site na oghere dị na mgbidi oghere ahụ onye ga -eguzo n'ihu anyị iji maa anyị aka. Anyị ga -enwe usoro nke sekọnd iji tụgharịa ụdịdị geometric dị iche iche anyị nwere n'aka.
Ọ bụ ihe egwuregwu dị na Space Wall nke ahụ ga -eme ka anyị gafere n'ihu mgbidi ahụ niile ya na oghere ya dị iche iche, ma ọ bụ na anyị na -akụkọ mgbe anyị na -amachaghị nke ọma iji chọta ọnọdụ nke ọnụ ọgụgụ ahụ. Ọ na -ejikwa nkeji sekọnd ga -emegide anyị nke ga -enwe ike imesi anyị ike mgbe anyị hụrụ na ọdịdị geometric anyị na -achọ ịtụba onwe ya na mgbidi oghere.
Ihe mgbagwoju anya a na -akpọ Space Wall n'ime ya anyị nwere ụdịdị abụọ, otu ụdị akụkọ na nke ọzọ enweghị usoro. Anyị na -akwado ka ịmalite na nke mbụ ka ị mara egwuregwu ahụ nke ọma, ka ị wee nwalee onye ahụ na -enweghị usoro yana ọnụ ọgụgụ geometric ndị ahụ siri ike karị.
Ọnụ ọgụgụ dị mgbagwoju anya nke geometric iji gafere mgbidi oghere
Mgbagwoju anya nke ọnụọgụ geometric, dị ka oghere anyị nwere na oghere oghere, ga -abụ ihe isi ike nke egwuregwu n'onwe ya. Ọzọkwa ike anyị ịtụgharị ọnụ ọgụgụ ahụ ma nwee ike iche na ọ ga -agafe oghere dị na mgbidi ahụ. Mgbe ụfọdụ anyị ga -anwale chi anyị, ebe ọ bụ na ụfọdụ ọnụ ọgụgụ na -adị nnọọ mgbagwoju anya ka ha nwere ọtụtụ cubes.
Mmetụta na -atọ ụtọ nke na -agba anyị ume ka anyị gaa n'ihu na -egwu egwu iji gosi ma anyị nwere ike karịrị ụwa iri anyị nwere na Oghere Space. Ikuku nke ejiri ụda ụda na gburugburu ya nwere ihe yiri nzụlite ihe nkiri Tron dịkwa mkpa maka ya.
Ihe mgbagwoju anya nke na -amanye anyị imega ahụ anyị ichetụ n'echiche na ọbụna jiri echiche nkịtị iji nwee ike imeri ụfọdụ ụwa. Nke a bụ ihe pụrụ iche nke Space Wall dị ka egwuregwu mgbagwoju anya dị elu nke zuru oke maka iwere ihe na ndụ n'ụzọ dị jụụ.
Ị nwere ndụ atọ na Space Wall
N'ezie, enwela obi nkoropụ n'ihu ụwa ụfọdụ, n'ihi na ị ga -enwe ndụ atọ tupu ịmalite ịmalite. Anyị nwekwara ike iji nkwalite dị iche iche jiri ego egwuregwu wee họrọ ịnweta textures ọhụrụ maka ọnụ ọgụgụ geometric. Ọzọkwa ụwa dị iche iche ga -etinye ụda olu na ụda agba dị iche iche iji gbakwunye ọmarịcha ahụmịhe ya niile maka egwuregwu izu ike ekele ụda ya.
Site na nke a, anyị na -ekwu ya na Oghere Space ọ ka mma iji ekweisi ịnụ ụtọ ahụmịhe ụda ọ na -enye. Na ngalaba teknụzụ, ọ pụtara na gburugburu geometric nke nwere ike iburu anyị gaa na '' akụkụ nke ha '' na ihe isi ike na -abawanye nke ọma iji mee ka anyị nwee mmasị, n'egwuregwu anyị nwere n'efu na Storelọ Ahịa Google Play.
Oghere Space na -abịa na Storelọ Ahịa Play site na ịrụ ọrụ ụlọ nke ọma, dị njikere ịbụ ihe mgbagwoju anya iji chọpụta na nke ị ga -eji mee ka uche gị zuru ike ka ị na -ewepụta mmegharị ahụ iji tụgharịa ọnụ ọgụgụ geometric dị iche iche na mgbagwoju anya. Igwe isi, ekwentị mkpanaaka na hammock n'akụkụ osimiri ma ọ bụ ọdọ mmiri, ma nwee oghere na oghere oghere.
Ihe mgbagwoju anya pụrụ iche na -atọ ụtọ
Ọ na -aghọ mgbagwoju anya
Ọtụtụ dị iche iche na ụwa
Developer: Egwuregwu ZARA
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Oghere Oghere bụ mgbaghoju anya na-atọ ụtọ iji daba akụkụ geometric